Ogaden News Agency (ONA) – OYSU iyo Jaaliyadda San Diego oo kaqayb-galay sannad-guuradii 2aad ee -Walk to End Genocide Los Angeles
OYSU iyo Jaaliyadda San Diego oo kaqayb-galay sannad-guuradii 2aad ee -Walk to End Genocide Los Angeles
San Diego, California: Sannadguuradii 2aad ee munaasabadda Walk to End Genocide ayaa waxaa lagu qabtay magaaladaLos Angeles maalintii axadda ee 14 bisha April 2013. Toddobaadkii hore ayaa isla munaasabaddan horey loogu soo qabtay magaalooyinkaSan Diego iyoMinneapolis. Halkaas oo ururka Midowga Dhalinyarada & Ardeyda Ogadenia ee magaalooyinkaasi ay ka qayb galeen. Ujeedada munaasabadahan ayaa ah in lagu soo bandhigo isla markaana lagu jahli bixiyo dhibaatooyinka foosha xun ee uu leeyahay xasuuqa bini’aadan.
Hadaba waxaa mar labaad munaasabaddan lagu marti qaaday ururka OYSU iyo Jaaliyadda Ogadenia ee San Diego, oo ay hor kacayaan Guddomiyaha Jaaliyadda San Diego mudane Cabdinasir Cabdullahi Faarax iyo guddomiyaha ururka OYSU San Diego mudane MaxamedNoor Maxamud Cabdi.
Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb-galay dad gaadhaya ilaa 4,000 oo qof iyo ururo gaadhaya 30 oo isugu jirey kuwa xuquuqul insaanka, kuwa samafalka iyo kuwa aan dawliga ahayn.
Sannadkan waxaa munaasabadan kasoo qaybgalay ururka OYSU fariciisaLos Angelesoo ah urur hadda la aas-aasay kadib markii dhanlinyaro horey uga tirsanaa ururka OYSU Denver ay usoo wareegeen dhankaLos Angeles. Gudoomiyaha ururka mudane Ilyas ayaa noosheegay iney ku faraxsan yihiin ka qaybgalka munaasabaddan isla markaana ay diyaar u yihiin la shaqaynta ururka OYSU San Diego iyo waliba urur weynaha OYSU ee caalamka.
Waxay dhamaan waaxyaha kala duwan ee ururada bulshada Jaaliyaddu fursad u yeesheen iney u soo bandhigaan dhamaan dad weynihii kasoo qayb-galay munaasabaddan xasuuqa iyo tacaddiyada ay dawladaEthiopiaku heyso shacabka Ogadenia. Waxaa dareenkaas gabay ingriisi ah ku muujisay Munira Daalac oo ah xubin ka mid ah ururka OYSU San Diego runtiina aad ula dhaceen dad weynihii goobtaas isugu yimid.
Isku soo duuduubo munaasabadan oo ahayd fursad qaali ah, ayey Jaaliyadda iyo ururka OYSU kaga faa’iideysteen iney kula kulmaan ha’yado kala duwan iyo ashkhaas daneeya xuquuqul insaanka. Waxayna ku dhamaatay guul iyo jawi aad u macaan.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa cajaladda muuqaalka ee munaasabadan haddii alle idmo sida ugu dhakhsaha badan. Fadlan kala soco qorahay online.
Xog-dheeraad ah ka doono:
OYSU San Diego (California) on Facebook.